Hague: Dambiile dagaalkii ex-Yugoslavia oo geeriyooday ka dib markii uu sun cabay – Kasmo Newspaper
Hague: Dambiile dagaalkii ex-Yugoslavia oo geeriyooday ka dib markii uu sun cabay
Updated - November 29, 2017 5:36 pm GMT
London (Kasmo), Mid ka mid aha dambiilayaashii dagaal ee ex-Yugoslavia, laguna magacaabi jiray Jeneral Slobodan Praljac, ayaa Dhakhtar ku yaalla Holland ku geeriyooday, wax yar ka dib markii uu sun ku cabay gudaha Maxkamadda Caalamiga ah oo ay ka socotay dhagaysiga dacwaddiisa.
Praljac wuxuu ka mid ahaa 6 hoggaamiye oo hore oo dhanka siyaasadda iyo militariga una dhashay Croat-ka Bosnia oo Maxkamadda Hague la hor keenay
Sannadkii 2013kii waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah, dunuubtii uu ka gaystay magaalada Mostar dartood, wuxuuna racfaan uu ka qaatay mar kale, maanta Maxkamaddu ku adkaysatay xukunkii hore.
Praljac oo 72 jir ahaa, wuxuu ku dhawaaqayay “Dambiile ma ahi”, ka dibna wuxuu qurquriyay sun si uu qudha isaga jaro, iyada oo muuqaalkaas si toos ah looga tebinayo shaashadaha Tv-yada. Ciqaabta 6da eedeysane, Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric iyo Berislav Pušic , ayaa u dhexeysa 10 ilaa 25 sano oo xabsi ah.
Xukunka ugu sarreeya wuxuu ku dhacay Jadranko Prlic oo xilligaas (1991-1994) ahaa R/Wasaaraha Jamhuuriyadda iskeed ula baxday “Croatian Republic of Herzeg-Bosna”, kan ugu hooseeyana, Berislav Pusic oo mas’uul ka ahaa xeryihii maxaabiista HVO, Maleeshiadii Bosnian-Croat.
Praljic wuxuu ahaa shaskhiga ugu muuqa dheer dacwadda 2 sababood dartood: wuxuu dhexdhexaadiye u ahaa Jamhuuriyaddii Zagreb iyo middii Bosnia-Herzeg, kuna haya sidaas 2 xil, sarkaal ka tirsanaa Wasaaradda Gaashaandhigga Croatia iyo Taliyaha Ciidammada Bosnia-Herzeg.
Waxaa kale oo lagu helay, isaga oo ahaa madaxa Hawlgallada, in uu mas’uul ka ahaa burburinta Buundadii qaddiimiga ahayd “Stari Most” ee u taagnayd astaantii Mostar ee wada-noolaanshaha dhaqammada kala duwan.
Buundada Mostar waxaa la duqeeyay 8dii Nofember 1993kii, waxayna duntay maalintii xigtay, iyada oo, sida Maxkamaddu xustay, soo gaarsiisay dhibaato culus shacabkii Muslimiinta ahaa ee magaalada.